Carruuraha lugu hayo familjehem oo la ciqaabo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Carruuraha lugu hayo familjehem oo la ciqaabo
Publicerat fredag 4 mars 2011 kl 10.32
Carruuraha iyo dhalinyaradda ee lugu hayo meel ka baxsan guryahooda waxaa la geeya waxa loogu yeero ”famiilye hem” Aqalka familada. Waana xarrun ay ogolaansho siisay xarrunta bulshada ee socialtjänst-tiga. Waxaa la siiya dhaqaale loogu loogu talagay meeleynta dhalinyaradaasi. Sidaas oo ay tahay waxaa jirro qeylo dhaan sanado badan soo yeereysay oo ku saabsan sida mutjamaca dhalintaasi lugu guryaha familjhem-ka.
Maanta ayaa hey’ada wakiilka dhalaanka ee Barnombudsmannen soo gudbineysa warbixin ay carruurahasi laftooda ay heleen fursad ay kaga hadlaan xaaladda ay ugu nool yihiin guryaha familyehem-ka
Maanta ayaa hey’ada wakiilka dhalaanka ee Barnombudsmannen soo gudbineysa warbixin ay carruurahasi laftooda ay heleen fursad ay kaga hadlaan xaaladda ay ugu nool yihiin guryaha familyehem-ka. Carruuraha ayaa ku marqaati furay xaalado waa weyn oo ay ka mid tahay in la ciqaabo iyo bahdilid loo geysto.
100 kamid ah carruurahaasi ayaa la weydiiyey su’aalo ku saabsan sida ay tahay xaaladooda guud ahaaneed. Carruurahan ayaa sheegay in lugu ciqaabo ineysan la kulmi karrin eheladooda, sidoo kale laga mamnuuco iney dibadda u baxaan. Waxaa ka jira xarrumahaasi carruuraha lugu hayo nidaamka loo yaqaano poänsystem, halkaasoo ay carruurahu sugaan lacag la siiyo toddobaadka. Marka ay yimaadana mas’uuliin ka tirsan xarrunta bulshada socialtjänsten ay muujiyaan iney yihiin dad wanaajiya carruuraha, waxaana ay sidoo kale goob ka ahaadaan booqashada loogu yimaado dhalaankaasi.